.“ပရိသတ်တွေအမြင်မှာ ကလေးမလေး အသွင်ပဲ မြင်နေသေးပေမယ့် မကြာမှီမှာပဲ အသက် (၂၁)နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ယွန်းယွန်း”. – Askstyle
.“ပရိသတ်တွေအမြင်မှာ ကလေးမလေး အသွင်ပဲ မြင်နေသေးပေမယ့် မကြာမှီမှာပဲ အသက် (၂၁)နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ယွန်းယွန်း”.
Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးေရ ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ဆုရွင္ ယြန္းယြန္းကိုေတာ့ အထူးအေထြ မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္.။ ယြန္းယြန္းကေတာ့ ကေလးအရြယ္ ခ်စ္စဖြယ္ေလးတည္းက က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္နဲ႕ ပရိသတ္ေတါရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈေတြကို ရရွိခဲ့သူေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။
ကေလးအရြယ္ေလးတည္းက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြကို႐ိုက္ကူးလာခဲ့ရသူ ယြန္းယြန္းကေတာ့ အခုဆိုရင္ ကတၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီး အသက္ (၂၁)ႏွစ္ ကို မၾကာမွွီမွာ ျပည့္ေတာ့မွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။
သူမရဲ႕ ငယ္ဘဝပံုရိပ္ေလးေတြကိုပဲ ပရိသတ္ေတြ ျမင္ခဲ့ရေပမယ့္ ယြန္းယြန္းကေတာ့အခုခ်ိန္မွာ ခ်စ္စရာေကာင္းသလို ေခ်ာေမာလွပသူ မိန္းမလွေလး တစ္ေယာက္အသြင္ကို ပိုင္ဆိုင္ေနပါၿပီ.။ ဒီကေန႕မွာေတာ့ယြန္းယြနး္က သူမရဲ႕ ုငယ္ဘဝပံုရိပ္ေလးနဲ႕အတူ “(၁) ႏွစ္သမီးတည္းက စူေထာ္လာတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေလး ..(၂၁) ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မယ္..”ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္..။
စူေထာ္ကာ ခ်စ္ဖို႕ေကာင္းသူ ကေလးငယ္ေလး ယြန္းယြန္းကေန မိန္းမလွေလး ယြန္းယြန္းေလးကို အားေပးခ်စ္ခင္သူပရိသတ္ေတြရွိရင္လည္း မွတ္ခ်က္ေလးေတြနဲ႕ အားေပးခဲ့ပါဦးေနာ္.။ ဖတ္ရႈ႕ေပးခဲ့ၾကတဲ့ Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေပ်ာ္ရႊင္သာယာတဲ့ ေန႕ေလးတစ္ေန႕ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိ္ုင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
“ပရိသတ်တွေအမြင်မှာ ကလေးမလေး အသွင်ပဲ မြင်နေသေးပေမယ့် မကြာမှီမှာပဲ အသက် (၂၁)နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ယွန်းယွန်း”
Cele Active World ပရိသတ်ကြီးရေ ကလေးသရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဆုရှင် ယွန်းယွန်းကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ ယွန်းယွန်းကတော့ ကလေးအရွယ် ချစ်စဖွယ်လေးတည်းက ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်တေါရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကို ရရှိခဲ့သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
ကလေးအရွယ်လေးတည်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါင်းများစွာနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကိုရိုက်ကူးလာခဲ့ရသူ ယွန်းယွန်းကတော့ အခုဆိုရင် ကတ္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး အသက် (၂၁)နှစ် ကို မကြာမှီမှာ ပြည့်တော့မှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
သူမရဲ့ ငယ်ဘဝပုံရိပ်လေးတွေကိုပဲ ပရိသတ်တွေ မြင်ခဲ့ရပေမယ့် ယွန်းယွန်းကတော့အခုချိန်မှာ ချစ်စရာကောင်းသလို ချောမောလှပသူ မိန်းမလှလေး တစ်ယောက်အသွင်ကို ပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ.။ ဒီကနေ့မှာတော့ယွန်းယွန်းက သူမရဲ့ ုငယ်ဘဝပုံရိပ်လေးနဲ့အတူ “(၁) နှစ်သမီးတည်းက စူထော်လာတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး ..(၂၁) နှစ် ပြည့်တော့မယ်..”ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
စူထော်ကာ ချစ်ဖို့ကောင်းသူ ကလေးငယ်လေး ယွန်းယွန်းကနေ မိန်းမလှလေး ယွန်းယွန်းလေးကို အားပေးချစ်ခင်သူပရိသတ်တွေရှိရင်လည်း မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့ အားပေးခဲ့ပါဦးနော်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ Cele Active World ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။